By noqday a Jumbo xubin aad taageeri doonto Rikoooo oo aad ka heshid faa'idooyinka soo socda
Ugu badnaan xawaare dajinta ilaa 4000 KB / s = 4 daqiiqo halkii GB!
Ilaa 12 Xilliyada Iskeelka / Isbarbardhigga ama 12 isku xirnaanta cinwaanka IP = (4000 KB / sx 12)
Ma jirto wax xayeesiin ah meel kasta oo goobta ku yaal, nadiif ah oo raaxo leh
Helitaanka qaar ka mid ah iyadana iyo goodies abuuray by Rikoooo
Direct download ka 'Download' ah buluug button
Muxuu Jumbo kuugu deeqayaa? Ku soo dirista kudhowaad boqolaal kun oo isticmaalaya qadar kharash ah. Kharashyadaas laguma dabooli karo oo keliya xayeesiin. Si kastaba ha noqotee, qorshe Jumbo ah ayaad si xushmad leh u caawin kartaa inaad ku ilaaliso Rikoooo.com online. Xubinimadu waa mid ikhtiyaari ah, waxaad weli si xor ah u soo ceshan kartaa dhammaan faylasha xawaaraha xadidan.
* Xawaalladu waxay kala duwan yihiin waxayna ku xiran yihiin xiriirka internetka iyo waqtigaaga
La awoodi karin in lagu rakibo walxaha qalabka.